Kusobala ukuthi abanjalo izinhlangano zamazwe ngamazwe njengoba UN, wonke umuntu uyazi. Ihlanganisa ezicini eziningi zokuphila, isibonelo:
ekusebenziseni ohambweni kwezomnotho;
kokuqhuba Inqubomgomo kwezikhali emhlabeni wonke;
It ikhuthaza ukuthuthukiswa indawo evumayo tembusave netemnotfo wezimali;
ekuthuthukiseni izinyathelo ukuqinisekisa ukuphepha kwemvelo;
uhlola izinqubo lokubala ubuningi babantu emhlabeni nokunye okuningi.
Kodwa akubona bonke abantu uyazi lapho indlunkulu UN. Futhi iqiniso lokuthi inhlangano has emahhovisi esethilayithi nasemahhovisi ezintathu - emibili e-Europe kanye eyodwa eMpumalanga Afrika.
Emaphakathi yindlunkulu UN eNew York
Elinye ihhovisi central noma ngqo endlunkulu - lokhu ehhovisi, okuyinto iyisonto main yokusebenza ukwahlukana. indawo yayo ngokomzimba eMpumalanga Okuphambene Manhattan, e-United Nations Square, 760, e-East River kanye ezimpambanweni zomgwaqo 42 48 ezitaladini.
Ukuze kutholakale odinga ukukwazi ikheli ebhilidini lapho indlunkulu UN: United Nations, New York, NY 10017.
United Nations Headquarters - jikelele "zone ngamazwe"
womhlaba indawo 73 sq. M. m. kuyinto "zone ngamazwe okuqondene wonke amalungu States kwenhlangano." Kodwa ngaphansi kwesivumelwano iziphathimandla e-United States kanye nenhlangano zensimu, lapho indlunkulu UN, sisasebenza US yomthetho zokwahlulela.
Lesi sakhiwo wavula ngo-1951 futhi has 39 izibuya. Kukhona umhlangano wenhlangano kuxazulule izinkinga ezibaluleke kakhulu futhi izinqumo ayisihluthulelo ukubaluleka ngamazwe.
I UN yamiswa ngo-Okthoba 1945, futhi umhlangano walo wokuqala esenzeka dolobha British - London, ngoba inhlangano azange abe isakhiwo ayo. Babeye lathatha isinqumo ukuthi ehhovisi ikhanda uzobe elise Lake Impumelelo - emzaneni eduze Long Island. Kusukela ngo-August 1946 emhlanganweni weBandla kanye uMkhandlu wezokuPhepha yayiqhutshelwa emadolobheni asemaphethelweni eNew York, futhi ngo-December ngomnyaka ofanayo, noJohn D. Rockefeller, Jr., sekubekwe eceleni izimali e inani eziyisishiyagalombili kanye aseMelika sesigidi. Ukuthengwa komhlaba nokwakhiwa UN wokwakha indlunkulu .
Indlunkulu Central: sikhethe izinkinga
Kuvele Eqinisweni ezithakazelisayo wukuthi States eziningi namalungu enhlangano wavumelana nalokho ukwakhiwa e-New York, sinikeze nokusikisela ukuze ihlanganise ihhovisi central. Ngokwesibonelo, Canada wafisa ukubeka ekomkhulu lawo Ontario, esiqhingini Navy, eduze Niagara Falls. Ngenxa yalesi isiphakamiso uvotele ngabaningi njengoba endaweni wawusempumalanga umngcele ophakathi kwala mazwe womabili, kodwa ekugcineni, New York sikhethwe.
Kuze kube manje, inqubomgomo ukholelwa ukuthi okukhethayo ngokungafanele, abaqondi ukuthi kungani UN izinze eNew York futhi wenze iziphakamiso ekudluliseni ekuphathweni ngendlela efanele Ngaphezu kwalokho, umbono wabo, indawo. Ngakho, ngo-2009 umongameli we Libya, uMuammar Gaddafi iye ahlinzekwa enye: endaweni lenhlanganiso ezimele e-Beijing noma Delhi, ngoba wayecabanga ukuthi kwase kuwukuphela East kunendima eyinhloko ekuthuthukiseni lesintu.
Lena akuyona ehhovisi kuphela lapho indlunkulu UN. Inhlangano uhlala emazweni ahlukahlukene. Amahhovisi e bobane. Main - e-New York, e Manhattan, inkampani noma lesifunda:
e Kenya (Nairobi).
indlunkulu Geneva eYurophu
Likuphi endlunkulu YaseYurophu-UN - esingesesibili ngobukhulu ngemva kokuba ihhovisi US?
EGeneva, ngesikhathi Palais des Nations. Lapha basuke bagxila wokuphatha kanye ehola neminyango ngamazwe, babeqhuba imihlangano izinkundla ukusebenza kwekhomishana ahlukahlukene kanye namakomidi. Ihhovisi nalo bekwi-sokweluleka, ukuqeqeshwa kanye nokumela abantu.
Geneva Palace of Nations, lapho endlunkulu-United Nations e-Europe, siqukethe emihlanu ukubaluleka zokuphatha zezakhiwo zixhunywe izinguquko izibuya wesibili nowesithathu. Isakhiwo itholakala endaweni epaki, owuhulumeni endaweni Geneva. Lesi sakhiwo lakhiwa ngo-1937 kuphela, lisuke kwaku iNhlangano Yezizwe. Ngo-1996, esigodlweni wadlulela lase-European, naphezu kweqiniso lokuthi Switzerland yamukelwa UN kuphela emva kweminyaka 6.
Kuyaphawuleka ukuthi ngo-phambi kwesakhiwo lapho indlunkulu UN, singabona esiveza ngesimo esihlalweni giant ophuke umlenze - umbhikisho ongokomfanekiso ngokumelene ukusetshenziswa anti-izisebenzi zasezimayini.
Yokusebenza zokuphatha emizimbeni, UN namasenti ine abasebenzi kuka 60,000 emazweni 170. Ehhovisi main e-New York ibekwe ingxenye yesithathu abasebenzi.
Amaphethini ofiphele izipikili. Creative Nail Art ngoba ozinikezele kweqiniso